स्थापना दिवसको अवसर पारेर रुपामा भलिबल, संस्कृति र नृत्यको उत्सव हुने – Samacharpati
बागलुङमा अस्पतालकाआइसोलेसनकक्ष भरिएपछि विद्यालयमा आइसोलेसन
तनहुँका काेराेना सङ्क्रमितलाई जिपी कोइराला उपचार केन्द्रमा राखेर उपचार गरिने
स्याङ्जा आँधीखोलाका किसान जुटे सामूहिक आलुखेतीमा
बचत संघद्धारा प्रदेश राहत कोषमा चार लाख
नीति तथा कार्यक्रममा विरोध गर्ने ठाउँ भेटिन : सांसद कोइराला
स्थापना दिवसको अवसर पारेर रुपामा भलिबल, संस्कृति र नृत्यको उत्सव हुने
पोखरा, १ फागुन । रुपा गाउँपालिकामा खेलकुद, संस्कृति र नृत्यको उत्सव लाग्ने भएको छ । रुपा गाउँपालिकाले स्थानीय तह स्थापना दिवसको अवसर पारेर अन्तर स्थानीय तह भलिबल प्रतियोगितासहितको कार्यक्रम गर्न लागेको हो । रुपाका गाउँहरुको प्रमुख खेललाई प्रवद्र्धन गर्दै रुपा गाउँपालिकाले स्थानीय तह स्थापना दिवसको अवसरमा गण्डकी प्रदेशका अन्तर स्थानीइ भलिबल प्रतियोगिताको आयोजना गर्न लागेको बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको छ ।
फागुन २४ गतेदेखि सञ्चालन हुने गरी अध्यक्ष कप खुल्ला भलिबल प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागिएको हो । प्रतियोगितामा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट राष्ट्रिय खेलाडीहरुले पनि खेल्न पाउने छन् । ‘रुपाको पहिचान, सबै क्षेत्रमा समृद्धिको अभियान’ नारासहित काम गर्दै आएको गाउँपालिकाले ‘युवालाई खेलकुदतर्फ आकर्षित गराैँ, स्वस्थ र समुन्नत समाजको निर्माण गरौं’ भन्ने उद्घोषका साथ खुला भलिबल प्रतियोगिता गर्न लागिएको अध्यक्ष नवरोज ओझाले जानकारी दिए । भीमाद गाउँपालिकाले उपाधि जितेको गएको प्रतियोगितामा १८ स्थानीय तह सभागी थिए भने यो वष कम्तिमा २५ स्थानीय तहले भाग लिने ओझाले बताए ।
प्रतियोगितामा प्रथम हुने स्थानीय तहले १ लाख २० हजार रुपैयाँसहित ट्रफी मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने छन् । द्वित्तीय, तृत्तीय र सान्वना हुने स्थानीय तहले क्रमशः ९० हजार, ६० हजार र ३० रुपैयाँ ट्रफी मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने छन् । विभिन्न उत्कृष्ट खोलाडीहरुले पनि पुरस्कार पाउने छन् ।
स्थापना दिवसकै अवसर पारेर गाउँपालिकाले सबै वडाका जातजातीको सहभागिता हुने गरी सांस्कृतिक झाँकी प्रदर्शन गर्ने भएको छ । ७ वटै वडाहरुमा लोप हुन लागेका जातजातिको संस्कृति परम्परलाई जगेर्ना र संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ हरेक वडाबाट झाँकी प्रदर्शन हुने अध्यक्ष ओझाले जानकारी दिए ।
वडा नं. १ बाट बोटे जाति अनिवार्य सहभागी हुने गरी जम्मा ५ समूह, वडा नं.२ बाट दलित अनिवार्य सहभागी हुने गरी ४ समूह, वडा नं. ३ बाट कुमाल अनिवार्य सहभागी हुने गरी ४ समूह, वडा नं.४ बाट ठकुरी अनिवार्य सहभागी हुने गरी ४ समूह, वडा नं. ५ बाट गुरुङ र नेवार अनिवार्य सहभागी हुने गरी ५ समूह, वडा नं.६ बाट मुस्लिम अनिवार्य सहभागी हुने गरी ६ समूह र वडा नं. ७ बाट नेवार अनिवार्य सहभागी हुने ५ समूहसहित बृहत रुपा गाउँपालिकास्तरीय झाँकी प्रदर्शन प्रतियोगिता हुने छ ।
यो वर्ष पनि गाउँपालिकाले फागुन २७ गते नयाँ पुस्ताको अनिवार्य सहभागितामा झाँकी प्रतियोगिता गर्न लागेको छ । झाँकी लिएर आउने प्रत्येक समूहले ५ हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम पाउने छन् भने प्रथम हुने समूहले ४० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाउने छ । त्यसै गरी दोस्रो र तेस्रो हुने झाँकीको समूहले ३० हजार र २० हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्ने अध्यक्ष ओझाले बताए । यो वर्षदेखि पालिका भित्रका प्रतिभा पहिचान गर्ने अर्को कार्यक्रम पनि रुपाले थालनी गर्न लागेको छ । पालिकाले पहिलो पटक रुपा डान्स आइडल गर्न लागेको हो ।
आइडलमा प्रथम हुनेले ३० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए । द्वित्तीय, तृतीय र उत्कृष्ठ गरी क्रमशः २० हजार, १० हजार र ५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्रदान गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ । आइडलका लागि बिहीबारदेखि नै अडिसन सुरु भइसकेको छ ।
स्थापना दिवसका अवसरमा ४ दिनसम्म गाउँपालिकाको केन्द्र भीरचोकमा उत्सव चल्ने उपाध्यक्ष लालसुब्बा गुरुङले जानकारी दिइन् । कार्यक्र सम्पन्न गर्नका लागि वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष नारायण गुरुङको संयोजकत्वमा खेलकुद मूल समिति र अन्य ८ उपसमिति गठन गरेर तयारी थालिएको छ ।
तरकारी नष्ट गर्ने कार्यप्रति उद्योग वाणिज्य संघ र उपभोक्ता मञ्चको आपत्ति
लकडाउन अवज्ञा गर्न बाध्य नबनाउन प्रदेश सरकारसँग आग्रह
निती तथा कार्यक्रम धेरै अध्ययन गरेँ तर सच्याउनुपर्ने ठाउँ देखिन : दिपक कोइराला
निती तथा कार्यक्रम माकुराको जोलो जस्तो भयो, न घाम नै छेक्न सक्छ ! न पानी नै !
नवलपरासीमा जुवा खेलिरहेको अवस्थामा रकमसहित ५ जना पक्राउ
बरिष्ट गीतकार अम्बिका गुरुङको राष्ट्रिय बाल गित “मेरो देश नेपाल” सार्बजनिक(भिडियो सहित)
गलकोट घुम्टे महोत्सवमा ‘हत्केला खेल्ने’ प्रतियोगिता